Na dia fananana loharano fitarihana marimaritra iraisana aza dia zavatra lehibe amin'ny orinasa rehetra, tsy hitondra sakafo amin'ny lovia io. Ho sambatra kokoa ianao raha mifanaraka amin'ny tatitra Google Analytics manaitra anao ny fiverenanao varotra. Amin'ity tranga ity, farafahakeliny ampahany amin'ireo fitarihana ireo dia tokony havadika ho varotra sy mpanjifa. Ahoana raha mahazo fitarihana taonina ianao, nefa tsy misy varotra? Inona no tsy mety ataonao, ary inona no azonao atao mba hitarika anao hiverina any amin'ny làlany tsara ny fantsom-pivarotanao?
Lahatsoratra tsara Jamil, manasà betsaka hieritreritra.
Arahaba avy any Alicante, Espana.
18 Jan 2017 amin'ny 8:23 PM
Matetika ny mpanjifa dia mijery ny hevitry ny orinasa na ny hevitry ny mpanjifa hafa alohan'ny hanohizany ny fahitana na fahalianana hijerena ireo pejy samihafa ao amin'ny tranonkalanao. Zava-dehibe ny fitantanana sy fanatsarana ny fotoana atiny, ny endrika ivelany ary indrindra ny resaka sy ny fifandraisanao amin'ireo mpanjifa tsirairay avy. Ny fampielezan-kevitra sy ny fitarihana dia tsy heverina ho mamokatra raha toa ka mandray andraikitra fotsiny ianao, saingy tsy manana fiverenan'ny varotra sahaza anao, noho izany dia zava-dehibe ny fitantanana sy ny fananana azy roa tonta.